ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စကင်နာ | October 2019
ကြိုဆိုပါတယ်! ဒါဟာတစ်ဦးထက်ပိုကွန်ပျူတာများအတွက်အိမျ၌ကြှနျုပျတို့အမြားစု, Laptop, Tablet နှင့်ဒါပေါ်မှာ။ မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်မရှိလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ပရင်တာ, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိရုံအတူတူပင်တဦးတည်း! လုံလောက်အောင်ထက်ပို - ထိုအခါအမှန်ပင်, အိမျ၌ပရင်တာအများစုပါ။ ဤဆောင်းပါး၌ငါဒေသခံကွန်ယက် shared access ကိုများအတွက်ပရင်တာကို configure ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုချင်ပါတယ်။
ကွန်ရက်ပေါ်မှာပရင်တာကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို။ ကွန်ယက်အတွက်အပေါငျးတို့သ PC များမှ [Windows7ကို, 8 အဘို့ညွှန်ကြားချက်] ပရင်တာကိုမျှဝေဖို့ကိုဘယ်လို
မင်္ဂလာပါ ငါဒေသခံကွန်ယက်ပေါ်တွင်စိတ်ကြိုက်ပရင်တာ၏အားသာချက်များကိုလူအပေါင်းတို့အားသိသာဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာ: - ပရင်တာမှဝင်ရောက်ခွင့်ကို set up မပါလျှင် - ထို့နောက်သင်သည်တကယ်တော့ဖိုင် 1 ခု print ထုတ်မှ (ပထမ (စတာတွေကို USB drive က, disk ကို, ကွန်ယက်မှတဆင့်) ကိုပရင်တာနဲ့ချိတ်ဆက်မယ့် PC ပေါ်မှာဖိုင်တွေကိုချွတ်ပစ်ရန်, ပြီးတော့သာထို့နောက်သူတို့ကို print ထုတ်ဖို့လိုပါတယ် - "မလိုအပ်တဲ့" လုပ်ရပ်တွေကို) များစွာလုပ်ဖို့, ကွန်ယက်များနှင့်ပရင်တာသတ်မှတ်ထားပါက - - သောအယ်ဒီတာများ၏မည်သည့်အတွက်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်မည်သည့် PC ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်တစ်ဦး "ပုံနှိပ်ပါ" ခလုတ်ကိုနှင့်ဖိုင်ကိုပရင်တာထံသို့စေလွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်နိုငျပါသညျ!
အဘယ်ကြောင့်ပရင်တာ print ထုတ်သည်မဟုတ်လော အမြန်ဖြေရှင်းချက်
မင်္ဂလာပါ မကြာခဏတစ်ခါတစ်ရံတွင်အလားတူပြဿနာကြုံတွေ့ရတစ်ခုခု, အိမ်မှာသို့မဟုတ်အလုပ်မှာဖြစ်စေ, ထုတ်ဝေသူများသည်: ပုံနှိပ်ဖိုင်များကိုပေးပို့ - ပရင်တာနဲ့တူ (လွန်း, ဒါမှမဟုတ်စက္ကန့်အနည်းငယ် on "buzzing" နှင့်ရလဒ်သုည) မတုံ့ပြန်ပါ။ ကျွန်မမကြာခဏကဤကိစ္စများကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရှိသည်ကတည်းကငါမှာတခါပြောပါလိမ့်မယ်: အအမှုပေါင်း 90%, ပရင်တာပုံနှိပ်ခြင်းမဟုတ်ပါအခါ, မည်သည့်ပရင်တာသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ၏ပျက်ပြားနှင့်အတူချိတ်ဆက်ကြသည်မဟုတ်။
https://termotools.com my.termotools.com © ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စကင်နာ 2019